I-Magnesium L-i-powder (778571-57-6) hplc = 98% | I-AASraw
/ Imikhiqizo / I-Nootropics powder / Magnesium L-threonate powder
Isilinganiselwa: SKU: 778571-57-6. Isigaba: I-Nootropics powder
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugremu kuya ku-mass mass ye-Magnesium L-i-powderate powder (778571-57-6), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
I-magnesium L-powderate powder kungenye yezinkinga ezinkulu kunazo zonke emhlabeni wesimanje wesentshonalanga, okukhathazayo ikakhulukazi okunikezwe ukubandakanywa kwamaminerali ezenzweni ezingaphezu kwe-300 enzymatic emzimbeni. I-Magnesium threonate ingenye yezinhlobo ze-biovailable kakhulu ze-magnesium futhi ikakhulukazi ekuthuthukiseni izinga le-magnesium ebuchosheni.
I-Magnesium L-threonate powder video
Ama-Magnesium ama-Raw ama-Raw abalulekile
Igama: I-magnesium L-powderate powder
Isisindo Yamamolekhula: 294.49
I-Melt Point: I-648-651 ° C
Umbala: emhlophe noma cishe i-powder emhlophe ekhanda
I-Magnesium e-P-woronate powder ekuthuthukiseni ukusebenza kobuchopho nokuthuthukiswa okwengeziwe
Ukusetshenziswa okukhulu kwe-Magnesium L-threonate powder
Umthamo we-magnesium we-infremiate ohambisana ne-1-2 amagremu ukuze unikeze inani elincane kakhulu le-magnesium eyisiqalo. Ubufakazi obuningi bubhekisela emkhatsini we-200 mg we-magnesium esemqoka yansukuzonke futhi ukuhlukunyezwa ungomunye wemithombo engcono kakhulu.
Isexwayiso ku-Raw Magnesium e-Powonate powder
Ukwamukelwa kwamathumbu emathunjini we-magnesium kuyahluka kuye ngokuthi i-magnesium idinga umzimba, ngakho-ke awekho nemiphumela emibi kakhulu ehambisana nokuhlanganiswa. Uma kukhona i-magnesium eningi kakhulu, umzimba uzothatha kuphela njengoba udinga. Kodwa-ke, ukulinganisa ngokweqile kungabangela ukucindezeleka kwamathumbu kanye nesifo sohudo. Akubanga nemiphumela emibi ebikiwe.
Abacwaningi basikisela ukuthi i-Magnesium L-powderate-powder ingakwazi ukuguqula insimu yokudla kwengqondo futhi isize wonke umuntu ukuba afinyelele futhi alondoloze umsebenzi omkhulu wokucabangela kuzo zonke izigaba zokuphila.
Ngokuthakazelisayo, abacwaningi eMIT bathola ukuthi i-Magnesium L-powderate powder iyakwazi ukwandisa inani le-magnesium ubuchopho bakho obungayithola. Akukhona nje lokho, abacwaningi baphawula ukuthi i-Magnesium L-threonate powder ithuthukise imemori yesikhathi esifushane nesikhathi eside
Esicwaningweni sokuqala eshicilelwe encwadini yezindaba ehlonishwayo i-Neuron ku-2010, abacwaningi be-MIT bahlola zonke izinhlobo zitholakalayo ze-magnesium eyengeziwe futhi baboniswa ku-model yezilwane ukuthi i-Magnesium L-i-powder e-threonate-kanye ne-Magnesium kuphela-i-powderous-powder-ikwazi ukuwela ebuchosheni futhi kukhulise amazinga we-magnesium. Ekuhlolweni kwabo, lokhu kwanda kwezinguquko ze-magnesium yobuchopho kubangele izinzuzo ezibonakalayo ezinyathelo ezibalulekile zokucabangela.
I-Magnesium Inzuzo Engcono
Ukucwaninga kwasekuqaleni kwe-magnesium ukuhlukunyezwa okwenziwe ososayensi e-UCLA, kodwa izifundo zanda kakhulu ngenxa yezinzuzo eziningi. Enye inzuzo enkulu ye-magnesium inselele yokumuncwa.Kukhona kunezinhlobo eziyishumi nambili ezihlukahlukene ze-magnesium, okufaka phakathi ezinye ezingazitholakali ngokuphelele, lokhu kuyisici esingajwayelekile futhi esiwusizo.
Uma i-magnesium iwele isithintelo segazi-sekhanda, iya emsebenzini ekuthuthukiseni ukubunjwa kwememori kokubili kwemigomo ende neyifushane. Ngenxa yokuthi i-magnesium ihileleka nge-enzyme esheshisa imigwaqo ye-synaptic (ukuxhuma ebuchosheni), izinsiza ezimbiwa ngamaminerali hhayi nje ukudala izinkumbulo ngokushesha, kodwa futhi nokuzilondoloza ekugugeni.
Enye inzuzo yokuhlukunyezwa kwe-magnesium ingcono yekhwalithi yokulala. Ngokusho kocwaningo lwe-2002 emaphepheni we-Pharmacopsychiatry, ukuhlukunyezwa kwe-magnesium kuyamisa ukutholwa okuthile nokudluliselwa okubizwa nge-GABAergic ne-glutamatergic. Ososayensi balinganisa nge-EEG ukuhlolwa ebuchosheni ukuthola ukuhlukunyezwa kwe-magnesium ekhwalithi yokulala.
Ngenxa yezizathu ezifanayo, abantu abaningi abasebenzisa ukuhlukunyezwa kwe-magnesium nabo bazizwa bencipha kakhulu futhi bengakhathazeki kunalokho.
I-Magnesium L-I-Powder Ewuthanda Amanzi
I-Magnesium L-I-Powonate Marketing powder
Ukuthenga kanjani i-Magnesium L-i-powderate powder kusuka ku-AASraw